गर्भवतीहरु अस्पतालमा प्रसूती सेवा लिन डराइरहेका छन् : डा. वालकृष्ण शाह - Rastrakokhabar
गर्भवतीहरु अस्पतालमा प्रसूती सेवा लिन डराइरहेका छन् : डा. वालकृष्ण शाह
९ बैशाख २०७७, मंगलवार १०:१२
कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिदै गर्दा समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र यसैको प्रतिरक्षामा उभिएको छ । कोरोना भाइरसको संभावित जोखिमबाट कसरी बच्ने वा संक्रमितको उपचार कसरी गर्ने भन्नेमै केन्द्रित छन् । यसको सोझो असर चाहि नियमित अस्पताल धाइरहेका अन्य रोगी र गर्भवतीलाई परेको छ ।
धेरैजसो गर्भवती द्विविधामा छन्, अस्पताल जाने कि घरमै बस्ने भनेर । स्वास्थ्यमा कुनै जटिलता आएमा के गर्ने वा प्रसुती सेवा लिनका लागि अस्पताल पुग्न कति सुरक्षित होला ? उनीहरु स्पष्ट छैनन् । यसै सन्दर्भमा प्रसुती तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. वालकृष्ण शाहसँग अनलाइनखबरले कुराकानी गरेको छ ।
Previous Post	त्यो १५८ रनले मेरो जीवन नै परिवर्तन भयो : ब्रेण्डन म्याकुलम
Next Post	लकडाउनमा मोटोपन पो बढ्दैछ कि ?